युगसम्बाद साप्ताहिक - अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र !
Wednesday, 10.23.2019, 11:45pm (GMT+5.5) Home Contact
अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र !
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनको केही दिन अघिदेखि विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेदवार लक्षित बम बिस्फोटका घटनाको जिम्मेवारी आधिकारिक रुपमा कसैले लिएको छैन । सरकार र सुरक्षा निकायले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको माओवादीले बिस्फोट गराएको भनेर उसका कार्यकर्ता पक्राउ गरे पनि आधिकारिक रुपमा त्यसको पुष्टि भएको छैन । बम पड्काएको आरोप लागेको चन्द माओवादीले पनि मुख खोलेको छैन भने सरकारले पनि प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
ठाउँठाउँमा बम डिस्पोज गरिएको छ । एकै दिन कैयौं ठाउँमा बिस्फोट भैरहेका छन्, तर यस विषयलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । शीर्ष नेताहरुलाई लक्षित गरी बम बिस्फोट गरिएका घटनाले कुनै पनि बेला जोसुकैलाई निशाना बनाउन सकिन्छ भन्ने संकेत गरेको छ । तापनि सुरक्षा निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको पाइँदैन । सरकार बम बिस्फोट गराउने समूहको पहिचान गर्न उत्सुक नहुने, बम बिस्फोट भैरहने, उम्मेदवार र पार्टीका कार्यकर्ता घाइते भैरहने अवस्थामा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने स्थिति अहिले उत्पन्न भएको छ ।
मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ अग्रसर हुने संकेत गरिरहेकै बेला निर्वाचनको माहोल बिथोल्ने गरी भएको बिस्फोटले मतदाता त्रस्त छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशत मत कम खस्यो पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा । मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनमाा योभन्दा कम मत खस्न आशंका गर्न थालिएको छ । बाम गठबन्धनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई झस्काइरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतासहितको चुनावली तालमेल र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच चलेको तीब्र प्रतिस्पर्धाकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले खेल्न खोजेको विश्लेषण पनि विश्लेषकहरुको छ । यदि मतदान अपेक्षाकृत कम भयो भने त्यसले दिने नतिजा सर्वमान्य होला कि नहोला ? ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदान भयो भने त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने तयारी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको छ ।
नेपाललाई निरन्तर अस्थिरताको जञ्जीरमा जकडिरहने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने शक्तिहरुको गम्भीर षड्यन्त्र भैरहेको छ । शुक्रबार काँकडभिट्टाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुबाहक बसमा दुई भारतीय नागरिकलाई ठूलो मात्रामा बम बनाउने सामग्रीसहित पक्राउ गरिएको घटनाले यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ । त्यो घटनापछि निर्वाचनका दिन ठूलै धमाका मच्चाउने योजना बनिरहेको बुझ्न कठिन छैन । संविधान जारी नगर्न दिइएको उर्दी अस्वीकार गरेर नेताहरुले जसरी संविधान जारी गरे त्यसको परिणाम नाकाबन्दीका रुपमा निस्कियो । मधेशवादीहरुको माग पूरा नगरी निर्वाचन नगराउनु भन्ने उर्दी पनि असफल भयो । नेताहरुले बेलाबेलामा बाहिरी शक्तिको दवाव र निर्देशन विपरीत मुलुकको हितमा काम गर्दैआएका छन् । निर्वाचन पनि त्यसैको एउटा कडी हो । माघ ७ गतेभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न भएन भने संविधान असफल हुन्छ र बाहिरी शक्तिले त्यही चाहेको हो ।
“बमको धमाकाबीच भएको चुनाव कसरी शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस, माओवादी र एमालेलाई आपसमा भिडाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र पार्ने खेल चलिरहेको छ । अहिले पड्केको बम देशभित्रबाट हैन बाहिरबाट आएको हो । जसरी संविधान ‘नबनाउ नबनाउ’ भन्दाभन्दा उछिट्टिएर बन्यो निर्वाचन पनि ‘नगर नगर’ भन्दाभन्दै हुन गैरहेको छ । यो सब नेपाललाई अस्थिर बनाउने खेल हो ।” राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्व महान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौलाको विश्लषण हो यो ।
नेत्रविक्रमलाई दोष दिएर बाहिरी शक्तिले जुन खेल खेलिरहेको छ त्यसका बिरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न कटिबद्ध हुनु नै अहिलेको एकमात्र आवश्यकता हो ।